"Yebo ama-piano angenisile kodwa aliyi ndawo igqom'" -DJ Lag
ULWAZI "DJ Lag" Gwala osanda kukhipha umucwi wegqom' osihloko sithi Uhuru Isithombe:FACEBOOK
NJENGOBA ama-piano ebukeka ugubuzela zonke izinhlobo zomculo wokujuxuza kodwa uphrojusa osedumise igqom' emhlabeni wonke, uLwazi Asande Gwala odume ngelikaDJ Lag, uthi alisoze lashabalala.
"Uma abantu bezogxila emsukeni wegqom', noma kanjani lizokhula. Umculo lo osazohamba amazwe. Yebo ama-piano angenisile kodwa aliyi ndawo, lisazohlala." UDJ Lag uqophe umlando emhlabeni wonke jikelele ngokufaka lo mculo kumaGrammy Awards njengoba ingoma ayiphrojusule uBeyonce esihloko sithi My Power futhi ekwi-albhamu yefilimu iLion King esihloko sithi Lion King: The Gift, yaqokwa kulo mqhudelwano.
Le ngoma ibophele ngisho umculi waseNigeria uYemi Alade, Busiswa, Moonchild Sanelly nomrepha wase-USA, uTierra Whack.UDJ Lag waqala ukuduma phesheya kunaseNingizimu Afrika, Ukuze adume kuleli kwaba wumbango owaba phakathi kwakhe neDistruction Boyz, kubangwa ingoma ethi Omunye Phezu Komunye. Kwavela ukuthi izinsimbi zayo zazifana ncimishi nezeyakhe eyayithi Trip To New York ayeyikhiphe ezintathu ezedlule. Kwabuye kwavela ukuthi laba DJ babeqhathwe wuDJ Mphyd waseCape Town owabadayisela ingoma eyodwa bonke.
UDJ Lag uthe okumenza yena ahluke kwabanye oDJ abagxile kwigqom' ukuthi owakhe umculo uwuthaka nezinye izinhlobo ukuze wamukeleke kalula nakwezinye izinhlanga.
"Ngicabanga ukuthi okungenza ngihluke kwabanye ukuthi ngithole ithuba lokuhambela amazwe kakhulu phesheya kwezilwandle futhi ngethule umculo kubantu abahlukene."
UDJ Lag usanda kukhipha umucwi ohambisana ne-video, okuyingoma ayiqophe ngokubambisana noMoonchild Sanelly esihloko sithi Uhuru Dis.
Echaza ngaleli culo, uDJ Lag (25), owaphothula uGrade 12 eWyebank Secondary, uthe uhlonipha ngayo indawo yobumnandi eseClermont eyaveza ikhono lakhe lokudijeya.
"Ngaleli culo ngikhuluma ngomakhelwane okhonze ukukhuluma kakhulu. Uthe usebenzise isenzasamuntu ngoba uqhathanise i-Uhuru njengomuntu onomsindo. Abantu bengayibuka kwiMTV Base, Channel O, Trace neYouTube."
Uthe wakhetha ukwenza le ngoma noMoonchild ngenxa yokuthi bake basebenza kwenye ingoma yakhe eyayithi Get It Down Low ngo2016.
Uthe njengamanje ulalela kakhulu umculo we-hip hop wasemazweni angaphandle nekwaito endala. Ezingwazini zoDJ athi zimhlaba umxhwele futhi abukela kuzo, ubalule uDJ Snake.
"Wangichaza kakhulu emuva kokumbona enandisa kwi-festival ebizwa nge-Ultra ekuqaleni kwalo nyaka. Ngibe sengimbukela kakhulu edlala emicimbini esakazwa ku-online, ngakhuthazeka yindlela adlala ngayo."